NASA Oo Sheegtay In Labada Todobaad Ee U Danbeeya 15- 30 Nov 2015, Laga Cabsi-Qabo Mugdi Dunida Soo Waajaha - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
NASA Oo Sheegtay In Labada Todobaad Ee U Danbeeya 15- 30 Nov 2015, Laga Cabsi-Qabo Mugdi Dunida Soo Waajaha
Washington(ANN)Hay’adda Dayaxgacmeedka iyo saadaasha Hawada ee NASA ayaa soo saartay warbixin ka kooban 1000 (Kun Bog) oo aay ku soo bandhigtay in Adduunka uu noqondoona (15) Maalmood MUGDI, taasoo bilaaban doonta Bisha November 15 oo Axad ah ilaa bisha November 30.
Charles Bolden, oo uu dhawaantan madaxweyne Obama u magacaabay madaxa NASA ayaa soo saaray warbixinta ka kooban 1000 bog.
Waxaa ku xusan warbixinta in bishan Oktober 26 VENUS iyo JUPITER in aay isku soo dhawaan doonaan si siman, waxaana u dhexeyn doona hal degree (1 Degree). Venus waxaa uu dhaafi doonaa dhanka koofur-galbeed Jupiter, taasoo keeni doonta in Venus iftiinkiisa oo kor u koco toban jibaar ka badan midka Jupiter.
Rogaal celinta gaaska uu sii deyn doono ayaa noqoneysa mid aanan la koobi karin hydrogenta ku jirta hawada sare. Hydrogentaas gaaska ah ayaa ku milmi doonta qorraxda dhulka qiyaas ahaan saacadu markey tahay 2.50 AM saqda dhexe.
Ku milmidaas hydrogenta ayaa keeni doonta qarax aad u weyn oo ka dhaca daafaca qoraxda. Qaraxaas ayaa waxaa uu kor u qaadi doonaa heer-kulka qoraxda in lagu qiyaasay 9000 oo degree.
Qorraxda ayaa markaa kaddib hoos u dhigi doonta heerkulkeeda kana dheeraan doonta dhexda. Waxaa tani keeni doontaa in iftiinka qoraxda uu hoos u dhaco adduunkana noqdo MUGDI.
Qaybo ka mid ah dunida ayaa dareemi doona wakhti 7-8 daqiiqadood ah iftiin aad u xoog badan ka hor inta aanu dhulku wada noqon .madaw amba mugdi taasi oo ku beegan 15ka nov.2015 ahna maalin axad ah.
HALKAN KA EEG WARBIXINTA